China Steel Tube Tower နှင့် စက်ရုံ | XY မျှော်စင်
10kV ~ 500kV မြင့်မားသောဗို့အားမျှော်စင်နှင့်သံမဏိတည်ဆောက်ပုံ၊ ISO လက်မှတ်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ တရုတ်စက်ရုံတိုက်ရိုက်၊ ယခုစုံစမ်းမေးမြန်းရန်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်တင်ပို့သူ။
XY တာဝါများ တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းရှိ ဗို့အားမြင့် သွယ်တန်းထားသော ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်တွင် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီအဖြစ် 2008 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Transmission and Distribution (T&D) ကဏ္ဍ၏ ကြီးထွားလာမှုလိုအပ်ချက်များအတွက် EPC ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။ ဒေသအတွင်း။
2008 ခုနှစ်မှစတင်၍ XY တာဝါတိုင်များသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံးနှင့် အရှုပ်ထွေးဆုံး လျှပ်စစ်ဆောက်လုပ်ရေး ပရောဂျက်များတွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။ 15 နှစ်ကြာ တည်ငြိမ်စွာ ကြီးထွားလာပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် လျှပ်စစ်နှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်းများ ဒီဇိုင်းနှင့် ပံ့ပိုးပေးသည့် သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်းများနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အပါအဝင် လျှပ်စစ်ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို ခင်းကျင်းပေးပါသည်။ ဓာတ်အားခွဲရုံ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိက ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်ကုန်များ ပါဝင်သည်။
110kV ဓာတ်အားလိုင်း တာဝါတိုင်
ရာဇမတ်မျှော်စင် သို့မဟုတ် နှောင်မျှော်စင်သည် သီးခြားဘောင်မျှော်စင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် 100 ကီလိုဗို့အထက် ဗို့အားများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးမျှော်စင်များအဖြစ်၊ ရေဒီယိုတာဝါတိုင် (ကိုယ်တိုင်ဖြာထွက်သည့်မျှော်စင် သို့မဟုတ် ဝေဟင်အတွက်သယ်ဆောင်သူအဖြစ်) သို့မဟုတ် စောင့်ကြည့်ရေးမျှော်စင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်အမည် 110kV ထောင့်သံမဏိရာဇမတ်ကွက်မျှော်စင်
မျက်နှာပြင်ကုသမှု ပူပူနွေးနွေး သွပ်ရည်စိမ်ထားသည်။
သွပ်ရည်စိမ်အထူ ပျမ်းမျှအလွှာအထူ 86um
လက်မှတ် GB/T19001-2016/ISO 9001:2015
တစ်သက်တာ နှစ် 30 ကျော်
Galvanizing စံ ISO1461
ကုန်ကြမ်းစံနှုန်း GB/T700-2006၊ ISO630-1995၊ GB/T1591-2018;GB/T706-2016;
တွယ်ကပ်စံ GB/T5782-2000 ISO4014-1999
ဂဟေစံ AWS D1.1
EU စံနှုန်း CE : EN10025
American Standard ပါ။ ASTM A6-2014
လုံးချင်းပတ်လမ်း vs နှစ်ထပ်ပတ်လမ်း
အရည်အသွေးပြည့်မီသော ထုတ်ကုန်များကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးနိုင်ရန်၊ ထုတ်ကုန်တိုင်းသည် ပြီးပြည့်စုံကြောင်း သေချာစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူခြင်းမှ နောက်ဆုံးတင်ပို့ခြင်းအထိ လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို တင်းကြပ်စွာစစ်ဆေးပြီး အဆင့်အားလုံးကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ တာဝန်ယူပါသည်။ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်သားများနှင့် QC အင်ဂျင်နီယာများသည် ကုမ္ပဏီနှင့် အရည်အသွေးအာမခံလွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။ သူတို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်အတွက် တာဝန်ယူပေးမယ်လို့ ကတိပေးထားပြီး သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေက အရည်အသွေးကောင်းရမယ်။
1. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ၏ထုတ်ကုန်များသည် ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံတော်စံ GB/T2694-2018 《ထုတ်လုပ်ခြင်းဂီယာလိုင်းတာဝါများ》၊ DL/T646-1998 《ထုတ်လုပ်ခြင်းဂီယာလိုင်းစတီးပိုက်ဝင်ရိုးများ´ နှင့် ISO9001 နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေအနေများ -၂၀၁၅ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။
2. ဖောက်သည်များ၏ အထူးလိုအပ်ချက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာဌာနသည် သုံးစွဲသူများအတွက် ပုံများကို ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖောက်သည်သည် ပုံဆွဲခြင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ မှန်ကန်သည်ဖြစ်စေ မမှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုသင့်သည်၊ ထို့နောက် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
3. ကုန်ကြမ်းများ၏ အရည်အသွေးသည် တာဝါတိုင်များအတွက် အရေးပါပါသည်။ XY Tower သည် ကောင်းမွန်သော တည်ထောင်ထားသော ကုမ္ပဏီများနှင့် အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီများထံမှ ကုန်ကြမ်းများကို ဝယ်ယူသည်။ ကုန်ကြမ်းများ၏ အရည်အသွေးသည် နိုင်ငံအလိုက် စံချိန်စံညွှန်းများ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီကြောင်း သေချာစေရန် ကုန်ကြမ်းများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်ကြမ်းအားလုံးသည် စတီးလ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီထံမှ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိပြီး ကုန်ပစ္စည်း၏ကုန်ကြမ်းသည် မည်သည့်အရပ်မှ လာကြောင်းကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်နေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအားလုံးတွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသော လက်မှတ်ရှိသည်။
မည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆို ကျေးဇူးပြု၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ယခင်- 110kV Single Circuit Angle Steel Lattice Tower
နောက်တစ်ခု: Tubular Steel Poles များ